वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : "हाम्रो समाज:एक अध्ययन" को प्रसंगमा एक-दुई कुरा
केहि समय पहिला हात परेको जनकलाल शर्माज्यूले लेख्नुभएको "हाम्रो समाज:एक अध्ययन" पढीभ्याईयो। यो पनि पूरै टुक्रे तालले, सब-वे र बसमा एक्लै परिएका बेलाहरुमा पढेर सिध्याइयो। कुनै केन्द्रीय विषयवस्तु (theme) र त्यसैलाई सघाउने घटनाक्रमहरु वा कथा नभएको, विविध विषयको जानकारीमूलक कृति भएकोले 'क्रमभंग' गर्दै पढ्दा पनि त्यति धेरै फरक भने पर्दोरहेनछ। तैपनि कतै नअल्मलिई लगातार पढ्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला।
यो कृति नेपालमा रहेका बिभिन्न जातजातिहरुको सामाजिक/साँस्कृतिक अध्ययन हो। आफ्नो सीमित ज्ञानका कारण यसमाथि समीक्षा गर्ने मेरो औकात छैन। यसैले यो टाँसोलाई जानकारीको बाँडचूडको रुपमा मात्रै लिईदिनुहोला। समाजको अध्ययन भन्नासाथ इतिहास र राजनीति लगायतका धेरै कुराहरु पनि स्वाभाविक रुपले जोडिएर आउँछन्। नेपाली समाजका बिभिन्न पक्षहरुका बारेमा धेरै नयाँ कुरा जानें मैले यो किताब पढेपछि। यो किताबलाई नेपाली समाज बारेको एउटा सानो विश्वकोष भने हुन्छ र सबैले संग्रह गर्न लायक छ। जातीय र क्षेत्रीय चेतना बढीरहेको र त्यसै अनुरुप राज्यब्यबश्था निर्धारण हुन लागेको यो घडीमा यस्ता पुस्तकहरु हाम्रा नीति-निर्माताहरुका लागि पनि सहायक-सिद्ध हुनसक्छन्।
"मानवविकासको सन्दर्भमा नेपाली समाज" बाट पुस्तकको शुरुवात गरिएको छ। नेपालको भौगोलिक स्थितिमाथि अलिकति चर्चा गरेपछि लेखकज्यूले पृथ्वीको उत्पत्ति र पृथ्वीको कालनिर्णयका बारेमा पश्चिमी र पूर्वीय दुबै धारणाका आधारमा निकै ब्याख्या गर्नुभएको छ। पृथ्वीमा मानवजातिको उदय र विकासका कुरा आऊँछन् त्यसपछि। संस्कृत र अँग्रेजीका "प्राविधिक" शब्दहरुको ब्यापक प्रयोग गरिएको यहाँसम्मको भागलाई पछि पढ्न छोडेर अगाडि बढेपनि खासै फरक पर्दैन, समय कम छ भने। तर एकचोटि पढ्दा राम्रै हुन्छ मानवजाति कसरी आजको अवश्थामा आईपुग्यो भन्ने जान्न। यसपछि नेपालमा मानवविकासको चर्चा छ।
नेपालमा जारी रहेको वर्णवाद, जातिवाद आदिमाथिको ब्याख्या दोश्रो अध्यायमा छ भने प्रजातिवाद (Racism) को चर्चा तेश्रोमा। कुनैपनि समाजमा धर्म, अभिचार र विज्ञानले पार्ने प्रभावको सम्बन्धमा चौथो अध्यायमा ब्याख्या गरिएको छ भने पाचौं र छैठौं अध्याय क्रमश: 'लोकआख्यान' र
'लोककथा'मा केन्द्रित छन्। अध्याय ६ देखि २१ मा नेपालमा रहेका बिभिन्न जातिहरुको बारेमा ब्याख्या गरिएको छ। हिमाली र पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने लगभग सबैजसो र तराइमा बस्ने धिमाल र थारुसमाज समेटिएका छन्।
कुनै जातिविशेषको चर्चा अलि बढी र कुनैको अलि कम छ (बाहुन-क्षेत्रीका केहि थरविशेषकै लागि सिंगै अध्याय समेत छुट्याइएको छ) तर लेखकले कुनै जाति/समाजविशेषप्रतिकतै पनि पूर्वाग्रह राख्नुभएको छैन। मलाई अलि खट्केकोचाहिँ यो पुस्तक तराइमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरुको एउटा समूह (जो अचेल आफूलाई 'मधेशी' भन्दै पहिचानका लागि संघर्षरत छ) को बारेमा भने मौन छ। उनीहरुलाई 'मूलधार'का नेपाली नमान्ने तत्कालीन शाशकीय नीतिको छायाँ जनकलाल शर्माज्यूमा पनि रहेको देखिन आऊँछ। जानकारीनै नभएको भन्ने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन। पहाडका 'ओझा' र तराइका 'झा' निकटका सम्बन्धी हुन् भन्ने जस्ता प्रसंगपनि लेखकज्यूले राख्नुभएको छ। कारण अरुनै पनि हुनसक्ला तर नेपालको समाजभित्रको एक अंगको रुपमा मधेशी समाजको पनि ब्याख्या आएको भए यो किताब एउटा पूर्ण किताब हुनेथियो। आशा गरौं, भविष्यका संस्करणहरुमा यो कुरा थप भएको देख्न पाइनेछ।
अन्तिम (२२औं) अध्याय तेश्रो संस्करण(२०५८ साल)का लागि थप गरिएको रहेछ। "हाम्रो समाजले आर्जेको भौतिक र सांस्कृतिक उपलब्धि" नाम दिईएको यो अध्याय पुस्तकभित्रका अरु अध्यायहरुको दाँजोमा कता हो कता फितलो छ। हाम्रो समाजमा रहेको जननेन्द्रीय पूजा (शिवलिंग आदि) लाई केन्द्रभागमा राखेर चर्चा गरिएको छ। यसको इतिहास खोज्दै लेखकज्यू भारतवर्षलाई नाघेर धेरै पुराना सभ्यताहरुसम्म पुग्नुभएको छ। निश्चित रुपमा जननेन्द्रीय पूजाका आफ्नै सांस्कृतिक/धार्मिक/दार्शनिक मान्यता छन् र हाम्रो समाजमा यसको ब्यापक प्रभाव पनि छ तर हाम्रो समाजले आर्जेको भौतिक र सांस्कृतिक उपलब्धिका रुपमा यसकै मात्र वरिपरि घुम्नु त्यति ठिक होईन कि? फेरि यो अध्यायको वर्णनशैली पनि चित्त बुझेन मलाई। एकदम हतारमा लेखेजस्तो लाग्छ। उनै कुराहरु धेरै ठाऊँमा दोहोरिएका छन्।
लेखकज्यूले सन्दर्भ-सामाग्रीका रुपमा धेरै ठाऊँमा शिखरनाथ सुवेदीद्वारा लिखित "थरगोत्र-प्रवरावली" नामक पुस्तकलाई उल्लेख गर्नुभएको छ र उक्त पुस्तकका थुप्रै श्लोकहरुलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्नुभएको छ।
बच्चै हुँदा हाम्रो गाऊँको कुनै घरमा 'शिखरनाथ भाष्य' छ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। 'शिखरनाथ भाष्य'लाई 'शिखरनाथ भास्यो' को रुपमा सुनिएछ पहिला, त्यसैले 'शिखरनाथ' भन्ने कुनै मन्दिर भासिएको कुरा लेखिएको किताब होला भन्ने दिमागमा बस्यो केहि समय। "यो कुरा हल्ला नगर्नु, फेरि पुलिस आऊँछ त्यो किताब खोस्न!" भनिएको पनि थियो एकचोटि। ठूलो हँदै गएपछि 'शिखरनाथ भाष्य' भनिएको हो भन्ने ज्ञान भयो, "थरगोत्र-प्रवरावली" भन्न गाह्रो लागेर 'शिखरनाथ भाष्य' भनिएको हुनुपर्छ। तर यसबारेमा बढी जानकारी लिने चाहना र प्रसंग दुबै मिलेन। "हाम्रो समाज:एक अध्ययन" पढेपछि अलि-अलि यसका बारेमा पनि जानकारी पाईयो।
नेपालमा रहेका बिभिन्न जातजातिहरुको थर र गोत्रका बारेमा लेखिएको पुस्तक रहेछ यो। सामाजिक कर्मकाण्ड विशेष गरी विवाहलाई ध्यानमा राखेर, कसको विवाह को संग चल्छ-को संग चल्दैन भन्ने कुराका लागि सन्दर्भपुस्तकका रुपमा तयार पारिएको रहेछ। "जातभातको कुरा उचालेर समाजमा फूट ल्यायो" भन्ने आरोप लगाउँदै राणाहरुले वि. सं. १९७८मा यो पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका रहेछन्। "हाम्रो समाज:एक अध्ययन" को 'परिशष्ट' मा दिईएका तीन सामाग्रीमध्येको दोश्रो, राणाहरुको भारदारीले गरेको यसैसम्बन्धी फैसला हो। प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मूल कारणको रुपमा "पहिलेनै छिनोफानो भईसकेको 'चारजाते' र 'सोह्रजाते' को कुरा फेरि उचालेर गुरुङहरुका बीचमा फाटो ल्याउन खोजेकाले शिखरनाथ सुवेदीको "थरगोत्र-प्रवरावली" माथि प्रतिबन्ध लगाईपाउँ" भनेर गुरुङहरुले दिएको निवेदनलाई देखाइएको छ। यसबाहेक, आफूलाई अरु 'रैती' सरह देखाएकोमा पनि शीखरनाथ सुवेदीसंग रिस उठेको हुँदो हो राणहरुलाई!
राणाहरुको त्यो प्रतिबन्ध-आतंक राणा-शाशन सकिएको ३०-३५ वर्षपछिसम्म पनि जनताको मनमा आलै रहेको देख्दा अहिले अनौठो लाग्छ मलाई!
उद्धरण गरिएका श्लोकहरुका आधारमा हेर्दा शिखरनाथ सुवेदीज्यूको भाषा एकदम परिष्कृत र माझिएको देखिन्छ, विशेष गरी परिशिष्टमा देखाइएका सरकारी कागजातको भाषाको दाँजोमा। हाम्रा धेरै सरकारी कागजातमा अझै पनि त्यस्तै काइते भाषाको प्रयोग जारी छ।
यो किताब पढ्ने मौका दिनुभएकोमा कुमारजीलाई धन्यबाद!
जनकलाल शर्माज्यूले लेख्नुभएका पुस्तकहरुमध्ये मैले पढेको यो दोश्रो हो। दश वर्षजति पहिला होला, उहाँको "कौतुकमय डोल्पो" भन्ने मनोरम यात्रा-विवरण पढेको थिएँ। यसमा उहाँले माथिल्लो डोल्पो(डोल्पा) को सुन्दर प्रकृति र त्यहाँको समाज/संस्कृतिको बारेमा लेख्नुभएको छ। अहिलेसम्म आफूले पढेका यात्रा-संस्मरणहरुमध्ये सबैभन्दा राम्रो एउटा छान्नु प-यो भने यहि छान्छुहोला मैले।
"कौतुकमय डोल्पो" पढेको केहि समयपछि एरिक भ्यालीको 'क्याराभान' फिल्म हेरें। 'क्याराभान' आफैंमा अति सुन्दर चलचित्र हो तर "कौतुकमय डोल्पो" पढिसकेपछि 'क्याराभान' नहेरेपनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्यो मलाई। त्यति शक्तिशाली छ त्यो किताब! यस्ता शक्तिशाली किताब कमै हुन्छन्।
Posted by Basanta at 1:12 PM
Anonymous February 14, 2009 at 2:52 PM
बसन्त दाईको बर्णनले मलाई नि त्यों किताब पढ़न मन लाग्यो
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) February 14, 2009 at 4:15 PM
जनक लाल शर्मा ज्यू को " हाम्रो समाज:एक अध्ययन " पढ़न नपाए पनी तपाईको प्रयास मार्फत त्यसको सार कुराहरु बुझ्न पाइयो त्योपनी विवेचनात्मक शैलीमा । मलाई पनी यस्ता पुस्तकहरु पढ़न औधी मन पर्छ ।
स्याटेलाइट February 14, 2009 at 5:45 PM
लेखको लागि धन्यबाद ।
सिकारु February 14, 2009 at 10:22 PM
बसन्त जी को बयान अनुसार पुस्तक् पुरानो शैलीको रोमान्चित अनि जात जाति र संस्कृतिको पहिचान जस्तो लाग्यो । पढने ईच्छा पनि जाग्दैछ । मौका मिले अवस्य पढने छु। जानकारिको लागि धन्यबाद बसन्त जी।
Basanta Gautam February 18, 2009 at 1:03 PM
प्रतिकृया दिनुहुने सबै साथीहरुलाई हार्दिक धन्यबाद! अलि-अलि कमजोरीहरु हुँदा-हुँदै पनि यो एउटा संग्रहणीय किताब हो, सबैले एकचोटि पढ्नुहुनेछ भन्ने आशा छ।